नयाँ मन्त्री बन्नेको भिड: बालुवाटार र खुमलटारमा – यी नेता बन्दैछन् नयाँ मन्त्री,
काठमाडौं- मन्त्रीमण्डल पु´नर्गठन, सं´वैधानिक एवं राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा सहमति जु´टाउन स´त्ताधारी दल ने´कपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार प्रधानमन्त्री एवं ने´कपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा भेटेर छलफल गरे । तर, पुनर्गठन र नियुक्तिको साझा मापद´ण्ड बनाउन भने नसकेको बताईएको छ ।
झ´न्डै तीन घ´ण्टा च´लेको छलफलमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनकै विषयमा अधि´कांश समय ख´र्चिएको बुझिएको छ । स´त्तारूढ दल नेपाल कम्यु´निस्ट पार्टीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएपछि अध्यक्षद्वयले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास थालेका हुन् । पछिल्लो ने´कपा सचिवालय बैठकमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने एजेन्डाले प्र´वेश पाएपछि पुनःअन्य मु´द्दालाई छायामा पार्ने गरी ने´कपा पुनर्गठन र नियु´क्तितिर केन्द्रित भएको छ ।
दुई अध्यक्षबीच मन्त्रिपरिषद् पु´नगर्ठन, सं´वैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति, पार्टी एकताको विषयमा छलफल भएको प्रचण्डका प्रेस सं´योजक विष्णु सा´पकोटाले जानकारी दिएका छन् । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा तीन वि´कल्प प्रस्तु´त गरे पनि अहिलेसम्म मापद´ण्ड तय हुन सकेको छैन । दुई अध्यक्षबीच यस विषयमा पुनः छलफल हुनेछ ।
मंगलबारको सचिवालय बैठकले सं´विधानअनुसार सं´वैधानिक नियुक्तिहरू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सोही बैठकले पार्टी एकता र एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्न १० दिनभित्र कार्ययोजना तयार गर्न पनि अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई जिम्मा दिएको थियो । दुई अध्यक्षबीच बाँकी रहेको सां´गठनिक ए´कीकरणको काम पूरा गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
पार्टीभित्रको एकता, स´मझदारी र विश्वासलाई सुदृढ गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्धलाई म´जबुत बनाउने, सरकारको कामलाई प्र´भावकारी ढं´गले अगाडि बढाई सरकारको विश्वसनीयता अझ बढी बनाउने र सरकारलाई अझ सफल बनाउनेतर्फ अघि बढ्ने ने´कपाको तयारी छ ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले रहेका केही मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अ´डान राखेका छन् भने कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले भने दुई वर्ष कार्यकाल पूरा भएका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने अ´डान राख्दै आएका छन् ।
चार महिना लामो आन्तरिक वि´वाद स´माधान गरेको नेक´पाभित्र अहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको छ । मन्त्री भएकाहरूलाई मन्त्रीमै यथावत् राख्न र मन्त्री बन्ने आ´कांक्षीहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र प्रचण्ड निवास खुमलटारमा धाउने क्रम पनि बढेको छ ।
यता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सार्ने तयारी गरिएको छ । सरकारले यसअघि नै उनलाई प्र´वक्ता तोकिसकेको छ । सञ्चार मन्त्री नै प्रवक्ता रहने व्यवस्था भएकोले नै उनलाई प्र´वक्ताको जि´म्मेवारी दिइको थियो ।
उनी सञ्चारमा आएपछि खाली हुने परराष्ट्रमा डा. भीम रावललाई जि´म्मेवारी दिने तयारी छ । यद्द´पि भीम रावलले उपप्रधानमन्त्रीसहितको जि´म्मेवारी दिएमात्र सरकारमा सहभागी हुने अ´डान राखेको स्रोतको दाबी छ । यसबारे पनि आज बस्ने सचिवालयले नि´र्णय लिने भएको छ ।
त्यसैगरी सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, बेदुराम भुषाल, वि´रोध खतिवडा, खगराज अधिकारी, महेश बस्नेतलगायतलाई मन्त्री बनाउने तयारी ओली प्रचण्डको रहेको छ ।
यसमा आज बस्ने सचिवालयले केही हेरफेर गर्न सक्ने बताइएको छ । यता दुई कार्यकाल प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर पनि अवसर नपाएका गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवार, विजय सुब्बा, गणेश ठगुन्ना, विशाल भट्टराई, राजबहादुर बुढा, प्रेम आलेमध्येबाट केहीले अवसर पाउन सक्ने स्रोतको दा´बी छ ।
हाल मन्त्री रहेका ज्ञवालीसहित, योगेश भट्टराई, डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, घनश्याम भुषाल, वसन्त नेम्वाङको पद सु´रक्षत देखिएको छ । उनीहरूबाहेकका कम्तिमा दश मन्त्रीको बि´दाइ हुने निश्चित रहेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसैगरी तिहारपछि भने कम्तिमा पनि ५ मुख्यमन्त्री पनि फेर्नेमा ओली प्रचण्ड सहमत देखिएका छन् । प्रदेश ६ का शंकर भण्डारी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरूङबाहेका अन्य मुख्यमन्त्रीको पद पनि ध´रापमा रहेको स्रोतको दा´बी छ ।